Maninona no mifidy anay | Xiamen Yasin Industrial and Trade Co., Ltd.
1. Famokarana mivantana avo lenta
Ny traikefa 34 taona dia manampahaizana manokana amin'ny famolavolana gelatin ho an'ny fampiasana fanafody ary ampiasaina betsaka amin'ny kapsily malefaka, akorandriaka kapila mafy, takelaka ary kapsily kely.ary mihoatra ny 10 taona amin'ny akorandriaka kapoaka foana sy ny tsipika collagen. Ny fitantanana mialoha, fahitana ara-tsiantifika vaovao, mpiasa famokarana mahay, ekipa mpivarotra mahatoky sy mazoto ary fanaraha-maso henjana tsara.
2. Manome vahaolana tanteraka sy fanohanana ara-teknika
Misy ny fanohanana ara-teknika. Isika dia matihanina amin'ny famokarana kapsily malefaka na kapsily poakaty na bera gummy rehefa mampiasa ny gelatinay;
3. Famokarana avo lenta
Ny kapsily bebe kokoa dia azo vokarina amin'ny alàlan'ny fampiasana gels kg mitovy amin'ny gelatin antsika raha oharina amin'ireo mpamatsy hafa.
4. Fitehirizana voalamina
Manana fahafaha-mitahiry ampy hitazomana ny lisitra ampy hahatratrarana ny fitaterana haingana.
Mankato tanteraka ny fenitry ny GMP amin'ny tsipika famokarana misy atrikasa madio madio 100 000 izahay. arak'izany dia afaka miantoka ny vokatra azo hamokarana amin'ny tontolo tena madio sy mandeha ho azy izy.
7. Fiarovana ny tontolo iainana namana
Ny fiarovana ny tontolo iainana no andraikitry ny lehilahy rehetra. Nanangana rafitra fitsaboana tontolo maloto fiarovana feno tontolo iainana izahay mba hitazomana ny fomba maharitra sy ara-tontolo iainana.
8. Serivisy mahomby
Ny solontenan'ny varotra dia natokana hanomezana serivisy ho an'ny mpanjifanay. Araraoty ny baiko sy ny fandefasana miaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa ara-potoana, araka ny filazan'ny firenena samihafa ny politikam-panondranana manome antontan-taratasy fangatahana fahazoan-dàlana feno. Vonona izahay ary afaka mandeha amin'ny kilaometatra fanampiny mihoatra ny nandrasan'ny mpanjifanay.
9. Vahaolana ara-bola marefo
T / T na L / C azo ekena, ny fandoavam-bola othat koa dia azo resahina arakaraka ny fahazoan'ny mpanjifa.